एमाले चितवनमा को को विजयी हेर्नुहोस् पुरा नामावली – Saurahaonline.com
एमाले चितवनमा को को विजयी हेर्नुहोस् पुरा नामावली
अधिवेशनबाट पूर्ण सदस्य पुरूषमा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा झगरुप्रसाद चौधरी (३८५), राजाराम रेग्मी (३९६) र श्यामकृष्ण आचार्यले (३६८) मत ल्याई विजय भए । वैकल्पिक सदस्य पुरुषमा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट नमराज पाठक (३९७) विजयी भए । पूर्ण सदस्य महिलामा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ तर्फ पुष्पा कुवँर केसी (३९४), शुशिला थपलिया पौडेल (३८०) मत ल्याई विजयी भए ।
यसै क्षेत्रको वैकल्पिक सदस्य महिलामा चण्डिका ढकाल (३७४) विजयी भइन् । पूर्ण सदस्य पुरुषमा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा केपी लामिछाने (३८०), दुर्गा दत्त अर्याल (३३६), विनोद रेग्मी (३९३), राजेन्द्र पोखरेल (३८०) र रामशरण कुँवरले (३६१) मत ल्याई विजयी भए ।
पूर्ण सदस्य महिलामा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पार्वती न्यौपाने (३९३), विष्णु भण्डारी कट्टेल (३५१) र मीना गिरी (३५५) मत ल्याई विजयी भए । यसै क्षेत्रको वैकल्पिक सदस्यमा महिलातर्फ अनिता पौडेल (४०४) ल्याई विजय भइन् ।
पूर्ण सदस्य पुरुषमा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा श्रीप्रसाद कँडेल (३९२), कमलबहादुर मल्ल (३९८), कृष्णराज न्यौपाने ‘लब्ली’ (३९०), पूर्णबहादुर श्रेष्ठ (४१७) र शेषमणि नेपाल (४२२) मतका साथ विजयी भए । यसै निर्वाचन क्षेत्रको पूर्ण सदस्य महिला, निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ तर्फ नमुना शर्मा (३५४), पार्वती सिलवाल (३६९) र भगवती पौडेल (३३७) मतसहित विजयी भइन् ।
त्यस्तै पूर्ण सदस्य पुरुषमा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा चेतनाथ न्यौपाने (३६९), पदमपाणि सुवेदी (४०२) र भीमसेन देवकोटाले (३६२) मत ल्याएका थिए । वैकल्पिक सदस्य पुरुषमा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ तर्फ एकनाराण शर्मा (३९७) र वेदप्रसाद लामिछाने (३६३) मत ल्याई विजयी भए ।
त्यस्तै पूर्ण सदस्य महिलामा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा कल्पना सापकोटा (४०६), मेनका रायमाझी (३३९) र राधा धितालले (३५६) मत ल्याई विजयी भएका हुन् ।
पूर्ण सदस्य पुरुषमा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा जीतबहादुर शाही (४०१), प्रेमराज तिमिल्सिना (३८५) र भूपालनाथ कँडेल (३७५) मत ल्याई विजयी भए । वैकल्पिक सदस्य पुरुषमा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा नारायणप्रसाद पौडेल (३९७) र मेखबहादुर खड्का (३६२) मत ल्याई विजयी भए ।
पूर्ण सदस्य महिलामा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा दिव्या आचार्य (३८३) मत ल्याई विजयी भइन् ।
त्यस्तै, वैकल्पिक सदस्य महिलामा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा ४०४ मतका साथ चन्द्राकुमारी बाँनिया विजयी भइन् । पूर्णसदस्य पुरुष मजदुरतर्फ गोविन्द अर्याल (३५५) ल्याई विजयी भए । पूर्ण सदस्य खुल्ला महिलामा मेनुका पाठक (३७२), विनिता तिमिल्सिना (३४०) र शुशिला लामिछानेले (३३५) मत ल्याइन् ।
पूर्ण सदस्य पुरुष जनजाति खुल्लामा अमरबहादुर तामाङ (३७५), जयचन्द्र चौधरी (३८१), दानबहादुर गुरुङ (३३४), पुरन महतो (३३८) र हिराबहादुर गुरुङ (३६९) मत ल्याइ विजयी भए । पूर्ण सदस्य महिला जनजाति खुल्ला तर्फ जुना राजभण्डारी (३६३) र सीता पुनले (३८४) मत प्राप्त गरी विजयी भइन् ।
पूर्ण सदस्य मुस्लिममा सपी मियालाई पाराजित गर्दै शम्शेर दिन मिया (३४७) विजयी भएका छन् । पूर्ण सदस्य पुरूष उत्पीडिततर्फ चक्र रुचाल (३११), राजेन्द्र हमाल (३२२) र विजयकुमार विक (२९९) मत ल्याइ विजयी भए ।
वैकल्पिक सदस्य पुरुष उत्पीडिततर्फ कमल रामदाम (३११) र शिवजी गायक (२९२) विजयी भए । पूर्ण सदस्य महिला उत्पीडिततर्फ थलकुमारी परियारलाई पराजित गर्दै ज्ञानु सुनार विजयी भइन् । सुनारले (३१७) मत पाइन् । पूर्ण सदस्य अपाङ्गतातर्फ अम्बिकालाल श्रेष्ठ (३०४) विजयी भए ।
पूर्ण सदस्य खुल्लातर्फ विजयी हुनेहरुमा अरुण पीडित भण्डारी (३६२), इमानसिंह लामा (३६२), कमलराज पाठक (३०१), खोमकान्त रेग्मी (३३२), गोपी श्रेष्ठ (३५८), गंगा लामा (३२८), घनश्याम कडेल (३२०), नारायणप्रसाद अधिकारी (३११), नरेन्द्र कङदङवा (३२८), पवनकुमार पिया (३११), प्रकाश ढुंगाना (३४३), रामजी सापकोटा (३२०), विष्णु महतो (३३२) र विष्णु तिवारी (३२३) मत ल्याई विजय भए । वैकल्पिक सदस्य, खुल्लातर्फ ईश्वरकुमार श्रेष्ठ (४१३), चिरञ्जीवी सुवेदी (३९९) र नरेश अधिकारी (३०५) मत ल्याई विजयी भए ।
लेखा कमिटीको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धी मुक्तिनाथ ढकाललाई १३० मतले पराजित गर्दै केशव आचार्य विजयी भए । आचार्यले ३९० मत ल्याउँदा ढकालले २५९ मत ल्याएका थिए । लेखा कमिटीको उपाध्यक्षमा रामशरण पाण्डे (३६५) मत र सचिवमा विनोद मिश्र ३६५ मत ल्याई विजयी भए । सदस्यहरुमा खगेन्द्र पौडेल (४००), गीतानाथ अर्याल (३९७), घनश्याम चापागाईं (३९२) र विष्णु अर्याल (३६८) मत ल्याइ विजयी भए । निर्वाचन कमिटीको अध्यक्षमा गोपीप्रसाद नेपाल (३७२) मत ल्याइ विजयी भए । उपाध्यक्षमा भीमप्रसाद सापकोटा (३७६), सचिवमा कृष्ण नेपाल विश्वास (३४७) मत ल्याई विजयी भए ।
सदस्यहरुमा पञ्चबहादुर लामा (४१६), पवित्रा पाठक (३८२), लीला भण्डारी (३३९) र हरिभक्त ढकालले (३२८) मत ल्याई विजयी भए । निर्विरोध निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरु मा मधेसी समुदायका गोपालजी गुप्ता, महिला खुला क्षेत्र नम्बर ३ बाट ईश्वरी शर्मा ढकाल, मजदुर महिलाबाट दुर्गा श्रेष्ठ, उत्पीडित महिलाबाट सरिता घिमिरे र महिला खुला क्षेत्र नं ४ बाट विपुला दवाडी निर्विरोध विजयी भएका थिए ।